(Monday 10 December 2018)
सुनबाट बनेका के के गहना देख्नु भएको छ ? लगाउनु पनि भएको होला । तर तपाईले सुनको चप्पल देख्नुभएको छ ? सुनको चप्पल सामान्यतया हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । तर व्रिटेनका एक डिजाइनरले विश्वको सबैभन्दा महंगो चप्पल बनाएर हामीलाई चकित बनाएका छन्…
यस्तो फुल, जसलाई फुल्न तीन हजार वर्ष लाग्छ
विश्वका केही ठाउँहरुमा यस्तो फुल पाइन्छ, जुन फुल ३ हजार बर्षमा एक पटक फुल्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । उक्त फुललाई संस्कृतमा उडुमम्बारा भनिन्छ । जसको अर्थ स्वर्गको फुल भन्ने हुन्छ । पछिल्लो केही बर्षमा विश्वका केही ठाउँमा यो फुल देखिएको भन्ने दाबी…
एक दुलहा दुई दुलही : विवाहको कार्ड बन्यो भाइरल
इन्डोनेसियामा कानुनी रुपमा नै बहुविवाह गर्न छुट छ । तर, कुनै पुरुषले एकैपटक दुई जनासँग विवाह गरेको भने पाइँदैन । तर, एक जना पुरुषले भने नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन् । उनले आफ्नो दुईवटा दुलहीसँग तस्विर खिचाएर अनौठो विवाहको कार्ड छपाएका छन् ।…
पूर्वमन्त्री यादव वडासदस्यमा निर्वाचित !
९ असोज, काठमाडौं । विगतमा वडासदस्य भएकाहरु स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख , मेयर भएकाहरु सांसद् र सांसद् भएकाहरु मन्त्री बन्न मिहिनेत गरिरहेका बेला एक पूर्वमन्त्री भने वडासदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका–३ को वडासदस्यमा पूर्वमन्त्री राजलाल…
२९ भदौ । पश्चिम अफ्रीकामा एउटा सानो देश छ बेनिन । अफ्रीकी कालो जादु बुडुको शुरुवात यहिबाट भएको थियो । बेनिनमा एउटा रहस्यमय समुदाय छ । यो समुदायका मानिसलाई जिउँदो भुत भनिन्छ । यस समुदायलाई इगुनगुन भनेर चिनिन्छ । इगुनगुनले अरुलाई छोयो भने त्यो ब्यक्ति…
काठमाडौंको मन्दिर भित्र भेटियो मानव कंकाल
२३ भदौ । काठमाडौंको जैसीदेवल मन्दिरको उत्खननका क्रममा मानव कंकाल भेटिएको छ । अठारौं शताब्दीको इतिहास बोकेको यो मन्दिर २०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले ध्वस्त भएपछि उत्खनन गर्दा डढेको अवस्थामा कंकाल भेटिएको हो । चौतारिया लक्ष्मीनारायण जोशीले मल्लकालमा निर्माण गरेको जैसीदेवलमा मानव…
६३ वर्षदेखि ननुहाएका व्यक्ति, जसले खान्छन् मान्छेको मासु !
इरानका अमोउ हाजीले ननुहाएको ६३ वर्ष भयो । ८३ वर्षीय उनको शरीरमा मैलोको मोटो पत्र जमेको छ । तर, अमोउ भन्छन ‘यही फोहोरका कारण ८३ वर्षदेखि म स्वस्थ छु ।’ फोहोरकै कारण लामो जीवन जिउन सकेको उनको तर्क छ । गाउँलेहरूले उनलाई सानो…
पुरुषभन्दा महिला बढी धोकेबाज
एजेन्सी –परम्परागत मान्यता अनुसार पुरुषहरू आफ्ना श्रीमती वा प्रेमीकालाई बढी धोका दिने गर्दछन् । हाम्रो टोल छिमेकमा कहिले केटाले केटीलाई त कहिले केटीले केटालाई विश्वासघात गरेर हिडेको देखेका छौं । इलिसिट इन्काउन्टर्स नामक एउटा फर्मले गरेको अध्ययनले केटाहरूले भन्दा केटीहरूले आफ्नो पार्टनरलाई बढी…
टाउको नभएको बच्चाको जन्मनासाथ मृत्यु
तस्बिर : हरि केसीको फेसबुकबाट सेरोफेरो५ साउन । रुकुमको स्यालापाखामा आधा मात्र टाउको भएको बच्चा जन्मिएको छ । सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर ८ को स्यालापाखा स्वास्थ्य चौकीमा सिस्ने गाउँपालिका ८ की शुसिला रावलले पुरा टाउको नभएकी छोरीको जन्म दिएकी हुन् ।…
यी हुन् १७ सेकेण्डमा ५० अण्डा खाने युवा
२१ असार । चीनका एकजना मानिसले केवल १७ सेकेण्डको समयमा ५० वडा अण्डा खाएर दुनियाँलाई चकित पारेका छन् । ३४ सेकेण्डको उक्त भिडियोमा एक पुरुष ५ वटा मग लिएर बसिरहेका छन् । ती मगमा अण्डा फुटाएर भित्रको भाग राखिएको हुन्छ । ५ वटा…